I-Pokémon Rumble Rush ngoku inokukhutshelwa kuGoogle Play | I-Androidsis
I-Pokémon yenye yezona ndawo zidumileyo emhlabeni. Kwiveki ephelileyo kwabhengezwa ukuba umdlalo omtsha wayesele esenza ukungena kwayo kuGoogle Play, eyiPokémon Rumble Rush. Umdlalo ofuna ukuthatha ithuba lokuthandwa kakhulu kwesaga kwi-Android. Emva kweziphumo ezilungileyo ebezikho ngePokémon GO, ethi idlula kwisigidi esinye sokukhutshelwa, nathi sinokuba nethemba umdlalo omtsha ngo-2020.
Ngoku i-Pokémon Rumble Rush iyafumaneka ngoku ngokusemthethweni kuGoogle Play. Ngumdlalo wesenzo apho kufuneka siphonononge isiqithi. Ezi ziqithi ziyatshintsha kwaye nganye yazo sifumana iintlobo ezahlukeneyo zepokémon. Kuya kufuneka sibambe iintsiba zokuhlola ukuze sihambe kwezi ziqithi.
Lo mdlalo xuba izinto zokulwa kunye nokubamba i-pokémon entsha, eyiklasikhi kule midlalo kuthotho. Iza njengomdlalo omnandi, onokuba nesiseko esihle sabalandeli kwi-Android. Nangona kuya kufuneka sibone ukuba abasebenzisi bakufumana njani ukumiliselwa kwePokémon Rumble Rush.
Kwakhona, Kufuneka kuqatshelwe ukuba kulula ukusebenzisa umdlalo. Inonxibelelwano olulula nolufikelelekayo, oko kuthetha ukuba bonke abaphulaphuli baya kuba nakho ukuyidlala kwiifowuni zabo ze-Android. Le yinto enokunceda lo mdlalo ukuba ufumane indawo yentengiso ngoku ekubeni ibetha iGoogle Play.
I-Pokémon Rumble Rush ngumdlalo wasimahla wokukhuphela. Nangona njengesiqhelo kolu hlobo lomdlalo, ngaphakathi kwayo sifumana ukuthengwa. Kukuthenga okunganyanzelekanga, kodwa banokukuvumela ukuba uhambe phambili kumdlalo, kwabo bafuna ukuzisebenzisa. Unokuzikhuphelela umdlalo ekupheleni kwenqaku.
Akuthandabuzeki I-saga yePokémon iyaqhubeka nokukhula. Okwangoku sinemidlalo embalwa efumanekayo kuGoogle Play, apho ngoku kongezwe le Pokémon Rumble Rush. Nicinga ntoni malunga nokuqaliswa kwalo mdlalo? Ngaba iya kuba neziphumo ezilungileyo kwintengiso?
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Imidlalo ye-Android » Lines Go » I-Pokémon Rumble Rush ikhutshwe ngokusesikweni kwi-Android